ထောက်ပံ့ — HunterThinks.com ထောက်ပံ့ — HunterThinks.com
dan Hogan, ငါ့အဖေ
Posted: 09 ဇူလိုင်လ 2018
Updated: 11 သြဂုတ်လ 2018
ဒီ button ကိုနှင့်အတူ, you enter the amount you can afford to support my safety and recovery.
သင်အသုံးပြုနေတဲ့ငါ့အဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့တတ်နိုင်ပမာဏကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ် ငွေပေးချေမှုရမည့်စျေးကွက်. My email address is [email protected], and remember to choose မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှပိုက်ဆံ Give .
1 အမိုးအကာ၏နေ့နှင့်လစဉ်အမေရိကန် $ 10 လုံခြုံဘေးကင်း1 အမိုးအကာ၏နေ့, အစာ & အခြေခံဆေးဝါးကိုအမေရိကန်လစဉ် $ 30 ကို1 အခြေခံရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏နေ့ကအမေရိကန်ကိုလစဉ် $ 60 လိုအပ်ကြောင်းအနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ superhero ထောက်ခံမှုအမေရိကန်လစဉ် $ 100 ကိုလိုအပ်ပါတယ်
အမြိုးသမီးမြား $ 200 လစဉ်
အမြိုးသမီးမြား $ 500 လစဉ်
အမြိုးသမီးမြား $ 900 လစဉ်
အမြိုးသမီးမြား $1400 လစဉ်
အမြိုးသမီးမြား $2000 လစဉ်
⇐ dan Hogan, သူရဲကောင်း, စူပါခရစ်ယာန်, အံ့ဖွယ်ထဲမှာတစ်ဦးကသင်တန်း၏ချန်ပီယံ < Previous post | Next post > အတွက် PTSD5မိနစ်များ: ဆေးပညာရောဂါများစွာသောဖော်ပြချက် ⇒
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | ရှာဖှေ | ငါ၏အနာလန်ထူထောကျပံ့ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | ထိတှေ့
မူပိုင် 2001–2018 မုဆိုး Hogan. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.